रुदी ‘बी’को भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत,अर्काे वर्षबाट विद्युत उत्पादन गर्ने - UrjaKhabar Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.
रुदी ‘बी’को भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत,अर्काे वर्षबाट विद्युत उत्पादन गर्ने
असार २८, २०७५ 2204 ऊर्जा खबर/काठमाडौं
लमजुुङमा निर्माणाधीन ६.६ मेगावाटको रुदी ‘बी’ जलविद्युत आयोजना ५० प्रतिशत पूरा भएको छ । बिन्दवासिनी हाइड्रो पावर कम्पनीले निर्माण गरिरहेको आयोजनाको आधा काम सकिएको हो ।
बाँध, पाइप लाइन र विद्युतगृहको काम तीव्र गतिमा भइरहेको आयोजनाका उपप्रबन्धक सरोज भट्टराईले बताए । उनका अनुसार बाँध क्षेत्रको ५० प्रतिशत काम सकिएको छ । साढे ३ किलोमिटर लामो पाइप लाइन बिछ्याउने काम १० प्रतिशत पूरा भएको छ । विद्युतगृहमा पनि ५० प्रतिशत काम सकिएको आयोजनाले जनाएको छ ।
एक वर्षअघि निर्माण सुरु भएको आयोजना २०७६ असारभित्र पूरा गरेर विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत करिब ९ किलोमिटर टाढाको मादीस्थित मङु्ग्रेबेसी सबस्टेसनमा लगेर जोडिने छ । विद्युतगृहदेखि सबस्टेसनसम्मको आवश्यक प्रसारण लाइन कम्पनीले निर्माण गरिसकेको छ ।
१ अर्ब १५ करोड लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा सानिमा बैंकको अगुुवाईमा ५ बैंकको ऋण लगानी छ । ७० प्रतिशत बैंकले ऋण लगानी गरेको छ । ३० प्रतिशत स्वपुँजी लगानी छ ।
कम्पनीले रुदी ‘बी’ सँगै ८.८ मेगावाटको रुदी ‘ए’ जलविद्युत आयोजना पनि निर्माण गरिरहेको छ । रुदी ‘ए’ रुदी ‘बी’ को क्यासकेड आयोजना हो । सिभिल संरचना निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुुगेको रुदी ‘ए’ बाट आगामी भदौदेखि विद्युत उत्पादन गर्ने तालिका छ ।